आखिर किन डराउँछन् त सलमान र शाहरुख अमिर खानसँग ? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
आखिर किन डराउँछन् त सलमान र शाहरुख अमिर खानसँग ?
काठमाडौं । बलिउडमा धेरै समय देखि तीन खान अर्थात सलमान,शाहरुख र अमिर खान बीच प्रतिस्पर्दा हुदै आएको छ। प्रतिस्पर्दा मात्र नभई तीन खानको बलिउडमा बर्चस्वो पनि कायम छ। “मिस्टर पर्फेक्ट” भनेर चिनिने अमिर खान मार्केटिङमा पोक्त रहेको कुरा त सबैलाई थाहा नै छ।
अमिरको डिस्ट्रिब्युटर बन्ने हल्लाका कारण बलिउड तातिएको समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकासित गरिरहेका छन्। यही समाचारका कारण शाहरुख र सलमान खानको टाउको दुखेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु बताइरहेका छन्।
आमिरको योजनाका कारण सलमान र शाहरुखमा डर पैदा भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु उल्लेख गरिरहेका छन्। अमिरको योजनाका बिषयलाई लिएर शाहरुख र सलमान खानले कस्तो कदम चाल्ने छन् भन्ने समयले नै बताउने छ।साथै अमिर डिस्ट्रिब्युटर बन्ने हल्ला कतिको सत्य हो त्यो पनि समयले नै बताउला। – बिगुल न्युजबाट साभार